Mapepa ekugadzira neVana - Anonakidza, Akareruka, uye Akasikwa! | Bezzia
Recipies yekuita nevana
Iwe unoda here kunakidzwa nenguva yemhuri? Saka hapana kuita sekuzvibvumira kutakurwa ne Recipies yekuita nevana. Nekuti zvidiki zviri mumba zvichave nenguva yekuvaraidza uye havazove ivo vega. Ichokwadi kuti vane zvakawanda kwavanogona kuzvivaraidza, asi iyo kicheni iriwo imwe yenzvimbo dzavanogona kusangana nekuwedzera nekuwedzera.
Nokuti kune akawanda mabikirwo atinogona kugadzira nevana sevamiriri. Nhanho dziri nyore sekukanya, iyo yauri kuda. Uyezve, ivo vachadya zvavo zvisikwa gare gare, uye izvo zvinogara zvichinyatsogutsa. Kana iwe wanga uchitsvaga mafaro uye akareruka mazano, saka haugone kupotsa zvese zvinotevera, nekuti iwe uchada vadiki, zvakatowanda. Totanga here?
1 Mapepa akareruka evana vasina moto
1.1 Keke rakagadzirwa nechingwa chakachekwa
1.2 Zvimwe zvinonaka fajitas
1.3 Zvibereko skewers
1.4 Taura chokoreti keke
2 Kunakidzwa mabikirwo evana
2.4 Mabhanana emabhanana
3 Zvokudya zvemasikati zvevana
3.1 Mazai akafanana nehowa
3.2 Puff pastry appetizer ine mafaro mafomu
3.3 Reindeer Rudolf mundiro yako
3.4 Centipede Saladi
3.5 Bheya rakaumbwa nyemba
Mapepa akareruka evana vasina moto
Mapepa akareruka evana uye asina kupisa kwepakati ndeimwe yemazano akanakisa atingawana. Nekuti tinoziva kuti kwavari mutambo, kunakidzwa kuve mukicheni. Naizvozvo, isu tinofanirwa kugara tichivadzivirira kubva kune dzimwe njodzi dzakadai semoto. Saka, tiri kuzobika akateedzana akareruka uye anonakidza maresipi evadiki uye nevadiki. Uye zvakare, ivo havazodi kubika, saka ivo vanoramba vachiwedzera kuita. Tora zvakanaka zvese zvavo!
Keke rakagadzirwa nechingwa chakachekwa
Iyo inotonhora ndiro yatinoziva tese. Uye zvakare, sezvo ichiumbwa nematanho akati wandei, ndiyo iri nyore kuita. Uku kutamba kwemwana uye nekudaro, ivo ndivo vanozonyanya kushandisa keke rakadai. Kuti uite izvi, iwe unoda furu yehukuru hwaunoda, ichagara iri sarudzo yako uye zvichienderana nevanodya. Ipapo, isu tichafukidza pasi nezvidimbu zvechingwa chakachekwa. Iwe unogona kutambanudza zvidimbu nemusanganiswa wechizi uye tuna, wedzera zai rakabikwa rakabikwa kana cucumber uye lettuce, chero chaunoda zvakanyanya!. Isu tinoisa imwe nhete yechingwa, tinoizadza zvakare uye tinopedzisa neiyo nyowani nyowani yechingwa. Iwe unogona kushongedza ne mayonnaise, zvidimbu zvemaorivhi uye wakagadzirira kuravira.
Zvimwe zvinonaka fajitas
Mune ino kesi Ehe, iwe unogona kugadzira zvimwe zvigadzirwa iwe pachako mukicheni, kuitira kuti gare gare ivo chete vanofanirwa kuzadza iyo fajitas. Nokungotenga zviyo zvechibage uye nekufunga zvimwe zvekuzadza, mukati memaminitsi mashanu tichava nechikafu chinotonhora uye chinonaka icho vana vadiki vanoisa pamwechete uye kuti vachazoravira vachinyemwerera.
Saka kuti vagone kudya michero yedhizeti kana sechikafu chekudya, hapana chakaita sekuvarega vachigadzirira mamwe anonaka skewers pachavo. Iwe unogona kutenga matanda e skewer matanda uye, pasi pekutarisa kwako, rega vana vadiki vaunze michero yavo yavanofarira. Ehezve, chakanakisa ndechekuti iwe wakambocheka michero kuita zvidimbu, kunyanya kana tichitaura nezvekuti vana vadiki kuti vazvicheke ivo pachavo. Pfungwa inogona kuve inonaka uye yakajeka panguva imwe chete!
Taura chokoreti keke
Chokwadi unoziva zvitete zvinotenderera zvavanotengesa mune chero supamaketi. Zvakanaka, iwo achave iwo mabhesheni makuru ekeke. Uye zvakare, iwe uchazoda chokoreti kirimu yesarudzo yako uye ndizvozvo. Ikozvino, sekufanana nechingwa chechingwa, isu tichafanirwa kugadzira matete. Chingwa chatinozadza nekirimu chokoreti uye nekudaro, tichagadzira matanda. Mukupedzisira, isu tinopedzisira taparadzira chokoreti zvese kumusoro uye nekunze kwekunze kwekeke. Shongedza icho nechokoreti kana maswiti ane mavara uye izvozvi iwe uchava nekeke rinonaka rechokoreti mune imwe maminetsi mashoma uye usina hovhoni.
Kunakidzwa mabikirwo evana
Kubika nevana isu tinoshandisa imwe yenguva dzinonakidza uye dzinovaraidza. Ehe, iva wakagadzirira kuzotora hupfu uye nezvimwe zvinoshandiswa kubva kumativi ese anoonekwa uye pamwe zvimwe zvisingaonekwe. Asi hapana munhu achatora iyo nguva yatakararama. Vanoda kushongedza, kupfugama uye kuvapo mumatanho ese ekujekesa. Naizvozvo, muchikamu chino tasarudza iwo mabikirwo ekugadzira nevana avanoda, nekuti vane zvese zvataurwa uye nezvimwe.
Ndiani asingade kugadzira pizza uye nekuwedzera, kuidya? Zvakanaka, vanawo. Naizvozvo, isu tinobheja kwechinguva pizza kumba. Kana iwe ukatenga mabhesheni akagadzirwa, iwe uchafanirwa chete kuaafukidza iwo nezvose zvaunofarira zvakanyanya, senge diki tomato, chizi, maorivhi, mimwe miriwo kana huku inotonhora inotonhora., pakati pevamwe. Kana iwe ukagadzira mukanyiwa, zvirinani, nekuti uchavarega vachienda nekuwedzera mvura kana hupfu nekuukanya. Iwe uchaona kuti zvakavakodzera sei!
Iko mhando yelollipop asi yakagadzirwa nemaoko edu pachedu. Kuti uite izvi, unofanirwa kupwanya mamwe muffin mundiro hombe. Ipapo, iwe unowedzera kirimu chizi uye unofanirwa kufugama kudzamara komputa yemugumo yasara. Kubva pahupfu uhu, isu tinotora zvidiki zvidiki, zvatichagadzira nazvo mabhora kana iwe unogona kuzvipeta zvinoenderana nezvaunoda. Kune rimwe divi, iwe unofanirwa kusungunusa chena chokoreti uye wobva wawedzera chikafu chekudya kuti ugadzire akasiyana mavara. Kuti tigadzire mapake-mapeke edu tinoda zvimiti, izvo zvinogona kutapira seMikado kana skewer stick. Isu tinonyorova kumusoro kwavo nechokoreti yakanyungudika uye tinya pamabhora ehupfu atakaita. Ikozvino zvinongoramba zvanyorovera bhora rese uye nekushongedza mune yakazara ruvara ne shavings kana chokoreti noodles. Mirira kuti dziome zvakanaka uye unogona kunakidzwa nemhuri yese.
Kubheka makuki ndeimwe yemafaro makuru atinawo kune vadiki. Nekuti kuvapa maumbirwo nderimwe remazano uye mashupika ari nyore evana. Kutanga tinonyungudika anenge magiramu zana nemakumi mashanu ebota uye toasanganisa ne150 gramu yeshuga. Wedzerai maviri epakati mazai uye zvishoma vanilla chinhu. Isu tinosanganisa zvese zvakanaka zvakare uye tinosefa magiramu 100 eupfu. Iye zvino zvinongoramba zviripo kuti uwane maoko ako akasviba kuti aumbe mukanyiwa. Ipapo vanokwanisa kugadzira mabhora nekuaumba kana kushandisa cheka, zvinoenderana nezvaunoda. Shongedza uye bika.
Kubva panguva iyo chokoreti inoonekwa pakati, ichagara iri imwe yeanonakidza mapikicha ekugadzira nevana. Mune ino kesi, ndizvo cheka mabhanana akati wandei muzvidimbu zvisina kunyanya kuonda. Kune rimwe divi, isu tinofanirwa kusungunusa chokoreti mundiro yakakura. Iye zvino unofanirwa kuisa chidimbu chega chega muchokoreti yakanyunguduka kuitira kuti ifukidze zvakanaka. Ivo vachakandirwa mune yega tereyi. Tinogona kuvashongedza sezvatinovada uye nefiriji. Mhedzisiro yacho inoshamisa!
Zvokudya zvemasikati zvevana
Iye zvino tava kuzoita mubatanidzwa wakakwana kune vadiki vari mumba. Nekuti isu tatoona kuti zviri nyore sei kubika nevadiki uye gadzira mabikirwo ekubika evana. Mune ino kesi, ivo vanogona zvakare kutibatsira, hongu, asi isu ticha tarisa zvishoma pane recipe mazano evana vasingade kudya yezvose. Vari mazano ekuti vana vadye vane hutano. Nekudaro isu tichafadzwa neyekugadzira mhedzisiro iyo inovhura yako ese pfungwa uye nerubatsiro rwako. Ndezvipi zvimwe zvatinga kumbire?
Mazai akafanana nehowa
Iyo yakakwana, yakapusa uye inokurumidza recipe. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kubika mazai uye paanenge ave kutonhora, kuvhiya woisa patiri. Zvino Cheka Cherry matomatisi muhafu woisa pamusoro seheti. Unogona kumwaya zvidimbu zvezai padomasi uye ndizvo zvazviri. Unogona kuperekedza dhishi iri riine saradhi diki uye yeuka kuti zvirinani kana mazai acho asina kukura kuti uve nemhedzisiro iri nani.
Puff pastry appetizer ine mafaro mafomu
Iwe unogona kufunga nezve dzimwe mhuka uye recortar puff pastry nezviso zvavo. Chinhu chakareruka kubheja pachigadziko chakatenderedza kumeso uye maviri madiki kune nzeve. Ehezve, kana iwe uchida kugadzira yenguruve, iwe uchaisa denderedzwa base kumberi. Iwe unogona kunamatira zvidimbu zvepuff pastry nekunyorovesa mukanyiwa. Iwe unoipa iyo chimiro chaunoda, iwe unogona kuwedzera kuzadza kana kushongedza uye muchoto. Vachachida!
Reindeer Rudolf mundiro yako
Kana iwe uchida kuti ivo vadye sadza chena, nematomatisi echisikigo uye akati wandei masoseji, iwe unogona ikozvino kugadzira ndiro nenzira yekugadzira. Kuti uite izvi, iwe unoisa iyo chaiyo yakatenderera mupunga mukati meplate. Kune mhino, isu tinoshandisa hafu yetamati nyanya. Zvidimbu zviviri zvemuorivhi zvichave maziso uye zvesare antlers sausage zvishoma yakavhurika pakati.
Zvekuti ivo vanodyawo mimwe miriwo, hapana kuita senge edza kugadzira ndiro dzekugadzira. Ivo pachavo vachakwanisa kukubatsira. Mune ino kesi, ndezve kubheja pakugadzira muviri wecentipede nemakucheka zvidimbu. Musoro wake unove zvakare hafu yetamati nyanya uye makumbo ake, zvidimbu zvekarotsi. Unogona kugadzira zuva pamusoro peplate nechibage chidiki.
Bheya rakaumbwa nyemba
Tiri kutozviona izvo nzira dzekubika dzekuita nevana dzinogona kuve dzinoyevedza. Naizvozvo, kana iwe ukaona kuti vana vako havasi vateveri venyemba, unofanirwa kugadzira chimwe chinhu. Uchavaisa mundiro, pakati chaipo, mupunga wakabikwa kuita muromo. Kune nzeve dzebere redu, zai rakabikwa muhafu, nepo kumeso, chidimbu chezai rakabikwa uye muorivhi uri pakati. Neiyi nzira isu tinopa hupenyu kune yavo ndiro uye ivo vachatitenda isu. Unotova nebere renyemba!
Ndeapi eaya mapepeke auri kuisa mukuita nevana vako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Recipies yekuita nevana
Nzira dzakanakisa dzekushandisa coconut mafuta